Cristiano Ronaldo oo markii afaraad aabe noqday markii saaxiibtiisa ay gabar u dhashay+SAWIRRO | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cristiano Ronaldo oo markii afaraad aabe noqday markii saaxiibtiisa ay gabar u dhashay+SAWIRRO
Published on November 13, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(13-11-2017) Cristiano Ronaldo ayaa soo dhoweeyay cunuggiisii 4-aad oo waxaa u dhashay Georgina Rodriguez oo gabar heshay Xalay markii Isbitaal ku yaalla magaalada Madrid ay ku Umushay.
Horay ayaaba magaceeda loo bixiyay Alana Martina, waana gabadha 2aad ee Portugal Kabtankooda, sidoo kale waa Cunuggii 4aad ee uu helo, horay wiil weyn ayaa ugu joogay dhowaan Mataano ay dhashay gabar Mareykan ah oo lagu Bacrimiyay halka hadda ay gabari ku biirtay qoyskiisa.
“Alana Martina waa ay dhalatay!” waxaa lagu qoray Ronaldo bartiisa Twitter. “Labaduba Georgina iyo Alana waa ay wanaagsanyihiin!
Cristiano Ronaldo ayaa hore u lahaa saddex carruur ah balse waxay ahaayeen carruur aan la mid ahayn inanta hadda u dhalatay ee Alana Martina maadaama oo ay ku yimaadeen qaabka bacriminta ee dumarka caruurta loogu dhex beero iyada oo kiro la siinayo.
Crisitano Ronaldo oo warka dhalashada Alana la wadaagayay 63.6 milyan qof ee bartiisa twitterka ku xidhan ayaa sawirka sare waxa uu soo raaciyay qoraalkan: “Alana Martina hadda ayay dhalatay! Geo iyo Alana aad ayay uf ician yihiin! dhamaantayo aad ayaanu u faraxsanahay”.